‘ओली भाइरसलाई सदाको निम्ति अन्त्य गरौं’ : बाबुराम भट्टराई | Nepal Ghatana
प्रकाशित : २९ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:१५
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पोखरामा पनि ओली भाइरस सल्केको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुन मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत, ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केकोु टिप्पणी गरेका हुन्।
‘यो महामारीले देशको संविधान र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने भयो भन्दै उनले त्यसको प्रतिवादमा एकजुट हुन अपिल गरेका छन्। ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको देखियो है । यो महामारीले देशको संविधान र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने भयो । अब कोही पनि ओली भाइरसबारे कुनै भ्रममा नपरौं। सबैले सबैतिरबाट सशक्त प्रतिवाद गरौं। ओली भाइरसलाई सदाको निम्ति अन्त्य गरौं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरौं, भट्टराईले लेखेका छन्।’
ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको देखियो है। यो महामारीले देशको संविधान र लोकतन्त्रलाई सिध्याउने भयो। अब कोही पनि ओली भाइरसबारे कुनै भ्रममा नपरौं। सबैले सबैतिरबाट सशक्त प्रतिवाद गरौं।ओली भाइरसलाई सदाकोनिम्ति अन्त्य गरौं! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गरौं!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) June 12, 2021
बाहिर नचल्ने पैसा भारतका जेल भित्र चल्छ रोचक संसार